Ryzen 36 00 Bu०० को लागि उत्तम मदरबोर्ड - खरीद मार्गनिर्देशन (२०२०) - पीसी
Ryzen 36 00 Bu०० को लागि उत्तम मदरबोर्ड - खरीद मार्गनिर्देशन (२०२०)
अद्यावधिक Update .१ PUBG बाट भर्खरै सुरू गरिएको छ र सबैजनाले यसको लागि ग्रुभ गर्दै छन्।त्यस्तै, यदि तपाईं अर्को पुस्ताको कल अफ ड्यूटी खेल्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई कम्तिमा पनि AMD Ryzen R5 1600X वा माथिको मोडेल चाहिन्छ। निश्चित रूपमा, यसले तपाईलाई प्रति सेकेन्डको आवश्यक फ्रेमहरू दिदैन। यदि तपाईं राइजेन 36 00 36०० मा अपग्रेडको लागि विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, एक सहयोगी मदरबोर्ड पनि महत्त्वपूर्ण छ।
एक मिल्दो मदरबोर्डले तपाईंलाई ग्राफिक्स, र्यामको साथ साथै HDD मा अपग्रेड गर्न अनुमति दिन्छ। यसको साथ, तपाईं केवल आधुनिक वारफेयर खेल्न सक्नुहुन्न तर धेरै आश्चर्यजनक खेलहरू पनि।
अधिक मदरबोर्ड किन्न गाइडहरू:
सर्वश्रेष्ठ X570 मदरबोर्ड्स
सर्वश्रेष्ठ Z390 मदरबोर्ड्स
कसरी AMD Ryzen5को लागी सबै भन्दा राम्रो मदरबोर्ड छनौट गर्न?
१. ग्राफिक्स कार्ड
जे होस् मदरबोर्डहरू बाह्य ग्राफिक्स कार्डहरूमा पेयरि। विकल्पहरूको साथ आउँदछ, योसँग आन्तरिक कार्ड पनि हुनुपर्दछ। यदि तपाईं AMD, Radeon ग्राफिक्स विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले रोज्नु भएको उपकरणले तपाईंको ग्राफिक्स कार्डमा पूर्ण पहुँच पाउनेछ। तपाईं निश्चित विकल्पहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै घडी-गति र अन्यहरू यसका बारे बढी जान्नको लागि। यसलाई ग्राफिक्स कार्डसँग मिल्दो बनाउने एक प्राथमिकता हुनु पर्छ।
२. फार्म फ्याक्टर
विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईले रोज्नु भएको कुनै पनि मदरबोर्डको फारम कारक हो। तिनीहरू विभिन्न आकार र आकारहरूमा आउन सक्छन्। तर तपाइँको क्याबिनेट आकार र ठाउँ मापन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईंको मदरबोर्ड ज्यादै थोरै छ भने, यो क्याबिनेट भित्र फिट हुँदैन। नतिजाको रूपमा, तपाईंले निश्चित गर्नुपर्नेछ कि आयामहरू EATX प्रकारको मदरबोर्डहरू भन्दा सानो छैनन्।
PC. PCI स्लटहरू
धेरै थोरै मानिसहरूले PCI स्लटहरू सोच्नको लागि महत्त्वपूर्ण विकल्पको रूपमा लिन्छन्। जब तपाईं कुनै मदरबोर्ड खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईं केही वर्ष पछि यसलाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। केहि हार्डवेयरको अपग्रेड जस्तै र्याम वा विस्तार कार्डहरू समान महत्त्वको हुन सक्छ। PCI स्लटको एक उच्च संख्या भएको तपाईंलाई तपाईंको क्याबिनेट भित्र अधिक हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू राख्न अनुमति दिन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि यससँग न्यूनतम एक पूर्ण-स्पीड PCI कार्ड स्लट उपलब्ध छ।
Soc. सकेट प्रकार
PCI स्लट जस्तै, कुनै पनि मदरबोर्डको सकेट प्रयोग गर्दा विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो एक महत्त्वपूर्ण कारक हो सही प्रकारको सकेटलाई विचार गर्नु जब तपाईं मदरबोर्ड छनौट गर्नुहुन्छ। त्यहाँ एक सकेट हुनुपर्दछ जुन तपाईंको सीपीयू फिट हुन्छ। यो तपाईंको मदरबोर्डको साथ पनि उपयुक्त हुनुपर्दछ। आफ्नो मदरबोर्ड किन्नु भन्दा पहिले तपाईं सकेटको प्रकार बारे निश्चित हुनुहोस्। सामान्यतया, AM4 सकेट उपयोगी हुनेछ।
M.मोटरबोर्ड विस्तार विकल्पहरू
अर्को ठूलो कारक जुन तपाइँ यसको विस्तार विचार गर्न आवश्यक छ। अवश्य पनि, तपाईं केवल मदरबोर्ड किन्नुहुन्न र यसलाई प्रयोग गरिरहनुहुनेछ। तपाईं हार्डवेयर विस्तारको संख्या जोड्नुहुनेछ जसले ग्राफिक्स, र अन्य सुविधाहरू समावेश गर्दछ। तपाईंको उत्पादलाई यी सबै विस्तारहरूको लागि ठाउँ राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। मानक PC PCIe स्लटहरूको साथ मदरबोर्ड प्राप्त गर्नु ठूलो अपग्रेड हुन सक्छ।
Ryzen 36 36 36०० को लागी सर्वश्रेष्ठ मदरबोर्ड:
१. Asus ROG Strix B450-F गेमि Mother मदरबोर्ड
Asus सधैं भरपर्दो मदरबोर्ड निर्माण गरीरहेको छ र निश्चित रूपमा B450-F ती मध्ये एक रहेको छ। यो आश्चर्यजनक उत्पादन Ryzen प्रोसेसर को सबै पुस्ता को लागी सजिलो अनुकूलता संग आउँछ। अवश्य पनि, यदि तपाईं आफ्नो मनपर्ने पात्रहरूको साथ उच्च-खेल खेल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यो छनौट गर्न एक अद्भुत उत्पादन हो।
ड्युअल M.2 र USB 1.१ जस्तै प्रभावशाली कनेक्टिभिटी विकल्पहरू यो चीज हुन् जुन तपाईलाई यो उत्पादनको साथ मनपर्दछ। डुअल M.2 र Gen2प्रकार-A कनेक्टर्सको उपयोग तपाईंको लागि राम्रो परिणाम दिन्छ। यस मदरबोर्डको प्रदर्शन सँधै सकारात्मक रहेको छ र अधिक खरीददारहरूले मन पराउँछन् यो कसरी CS: GO र PUBG सँग खेल्दछ। तपाईं आफ्नो नियमित उपयोग को लागी यस उत्पाद लाई चाहानुहुन्छ।
किन यो अनौंठो छ?
AMD B450 Chipset प्रोसेसर समर्थन को नवीनतम उत्पादन हो जुन तपाईं यस उत्पादनको साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो अद्भुत उपकरण एक साइबर आउटलुकको साथ आउँदछ जुन ROG I / O ढालमा हेरिरहनुमा अद्भुत लाग्दछ जुन एक स्लिट म्याट कालो समाप्त हुन्छ। जाहिर है, कुनै पनि पेशेवर गेमर मेरो सानो भाई जस्तै यो संग खेल्न मनपर्छ।
व्यक्तिगत रूपमा, म मेरो पीसीमा ASUS B450-F राख्न चाहन्छु किनभने यो रातमा अचम्म लाग्दो देखिन्छ। फ्यान Xpert4र डीसी प्रशंसकको कारण मैले आश्चर्यजनक कूलि options विकल्पहरू पनि देखेको छु। यसले समर्पित PWM / DC हेडर समावेश गर्दछ जुन पानी कूलिing सेटअपहरू रोक्न सक्छ। पाठ्यक्रममा, अँध्यारो कोठामा वा पारदर्शी क्याबिनेटको साथ पनि, यो मदरबोर्ड हो जुन सबैलाई कल्पना हुन्छ।
खरीददारहरूले यो अद्भुत उत्पादनलाई पैसाको लागि ठूलो मूल्यको रूपमा भेट्टाउँछन्। यो मदरबोर्ड छनौट गर्नको लागि त्यहाँ दुई विशेष कारणहरू छन्। एउटा यो प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन हो जुन यस उत्पादनले प्रदान गर्दछ र अर्को साइबर आउटलुक हो। भन्नु पर्दैन, Asus ROG Strix B450-F गेमि Mother मदरबोर्ड सबै भन्दा माथि उठ्दछ र दुबै पाकेट मैत्री पिचमा र यसले प्रदान गर्ने प्रदर्शन पनि।
को लागी उत्तम फिट:
यो मदरबोर्ड पेशेवर गेमरहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हो जुन नियमित प्रोसेसरहरू र उनीहरूको सहयोगी मदरबोर्डहरूमा अपग्रेड गर्न चाहन्छन्। यो विशेष उपकरण पक्कै पनि अरूलाई बाहिर पार्नेछ।
निर्माण गुणवत्ता प्रयोग गर्न अत्यन्त उत्कृष्ट छ
यो पारदर्शी क्याबिनेटमा उत्कृष्ट देखिन्छ
यो उत्पादन सभ्य बन्डल सफ्टवेयरको साथ आउँदछ
तपाइँ AMD स्टोर MI समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
मूल्य प्रयोग गर्न अत्यन्त सहज छ
यस उत्पादनको साथमा कुनै पनि वाइफाइ मोड्युल छैन
तपाइँले हल्का BIOS निरीक्षणहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ
२. गीगाबाइट एक्स 70 A० अरोस एलिट मदरबोर्ड
AMD Ryzen5प्रोसेसरको लागि सर्वश्रेष्ठ मदरबोर्डहरूको सेक्सनमा गीगाबाइट X570 अर्को महान नाम हो। यो Q-फ्ल्यास प्लस सुविधाको साथ सजिलो bios अपडेटको साथ आउँदछ। पनी तपाइँले सीपीयू र मेमोरी सेटअप गर्नुपर्दैन किनकि बायो फाइल स्थापना गर्नु नै पर्याप्त छ। यसले ग्राफिक प्रोसेसरहरूको एक विस्तृत श्रृंखला समात्छ जुन खेल अनुभव सुधार गर्न सक्दछ।
सुरक्षा र बडी निर्माण बढाउन, यो उत्पादन एकीकृत I / O ढालको साथ आउँदछ। यो हेवी मेटल शरीर र सुरक्षा सामग्रीका चारै तिर कतारबद्ध छ जुन तपाईं शिष्ट शरीर प्राप्त गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। नतिजाको रूपमा, यो मदरबोर्ड प्रदर्शन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। यसले तपाईंलाई निर्बाध अपरेशन्स र छिटो सेटअप विकल्पहरूसँग काम गर्न अनुमति दिन्छ।
गीगाबाइट X570 ले १२ + २ पावर डिजाईनको अद्भुत अवधारणा प्रस्तुत गर्दछ। यो डिजिटल PWM नियंत्रकहरूले चारैतिर भरिएको छ जुन तपाईं सभ्य कम्पोनेन्टहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। यो डिजिटल कन्ट्रोलर तपाईंलाई अविश्वसनीय सटीकको साथ प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। नतिजाको रूपमा, यसले तपाईंलाई कम्पोनेन्टमा शक्ति पुर्‍याउन अनुमति दिन्छ। यसैले, X750 बाट प्रतिक्रिया शानदार छ।
अर्को प्रभावशाली सुविधा DDR4 XMP समर्थन हो। यस उपकरणले सजिलैसँग 000००० मेगाहर्ट्जमा घडी गर्न सक्दछ जुन यसलाई एक राम्रो विकल्प हो। प्रदर्शन प्राप्त गर्न गिगाबाइटले आफ्नो उत्पादनको साथ XM केबल ल्याएको छ। यो तपाइँलाई एक सक्रिय प्रदर्शन बूस्ट प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो दुई M.2 SSD उपकरणहरू द्वारा समर्थित छ। तिनीहरू मध्ये प्रत्येक थर्मल गार्डको साथ आउँदछ सम्पूर्ण सेटअप चिसो राख्न।
खरीददारहरूले Gigabyte X570 AORUS एलिट मदरबोर्डलाई माया गर्छन् किनकि अनुकरणीय प्रदर्शनको कारण यसले सजिलै उत्पादन गर्न सक्दछ। ती मध्ये धेरैले यो मदरबोर्डलाई उपलब्ध x570 समर्थनको रूपमा छनौट गर्न एक विचार पारित गरे। केवल किनभने यो प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू र यस उपकरणले दिन्छ प्रदर्शन पक्कै बेमेल छ।
गीगाबाइटले यो उपकरण शीर्ष गेमि meets भेटहरूको लागि प्रस्तुत गरेको छ र यो पेशेवरहरूको लागि उत्तम फिट हुन सक्छ। यस उत्पादनले एक VRM हीटसि features्क प्रदान गर्दछ जसले सबै समावेश गरिएको घटकहरू शान्त राख्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ शरीर भर सबै तरल कूलरहरू स्थापना गर्न धेरै पोर्टहरू पनि छन्।
यो उत्पादनको साथ एक M.2 heatsink संग आउँछ
एकीकृत I / O शिल्ड उपस्थित छ
यो उत्पादनको डिजिटल VRM को १२ चरणहरु छन्
सजिलो पहुँचको लागि Q-Flash Plus बटन थिच्नुहोस्
मुख्य बोर्डमा २ Pin पिन पावर कनेक्टर छ
RGB प्रकाश अधिक हुन सक्छ
त्यहाँ कुनै प्रकार सी पोर्ट उपलब्ध छैन
As. Asus Prime B450M-A वाणिज्यिक मदरबोर्ड
धेरै व्यक्तिले Asus Prime B450M-A लाई एक पेशेवर मदरबोर्डको रूपमा प्रयोग गर्छन् र उनीहरू यस उत्पादनको बारेमा सही छन्। जडान गर्दा, तपाईं यो मदरबोर्ड सजिलै तेस्रो जेनरेशन Ryzen प्रोसेसरमा जडान हुन्छ भनेर भेट्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईले कुनै परिवर्तनहरू चाहानुहुन्छ भने तपाईले बायो मेनूलाई म्यानुअली अपडेट गर्नुपर्नेछ।
कनेक्टिभिटीमा आउँदैछ, यो उपकरणको एक शानदार कन्फिगरेसन छ। तपाईं सीधा LAN लाई जडान गर्न सक्नुहुनेछ किनकि यसले १ जीबी इनपुट सहन सक्छ। अधिक कन्फिगरेसनहरूलाई अनुमति दिनका लागि, मैले धेरै व्यक्तिहरू यसलाई D-sub साथै DVI प्रदर्शनको साथ कन्फिगर गरेको देखेको छु। एक HDMI २.० इनपुट भएको विकल्पले तपाइँलाई तपाइँको आवश्यकता अनुसार Xbox वा PS5 प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
यस उत्पादनले अद्भुत DDR4 र्याम अनुकूलता प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई सजिलो मेमोरी भण्डारण प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यसमा छ फरक र्याम स्लटहरू छन्। तपाईं मैन्युअल्ली कन्फिगर गर्न वा तपाईंको आवश्यकता अनुसार र्याम ड्राइभहरू थप्न सक्नुहुन्छ। समर्थित चिपसेट AMD B450 मोडेलले बनेको छ जुन शितल स्थानमा सभ्य छ।
यस मदरबोर्डलाई शक्ति दिनको लागि यसलाई लिथियम-आयन ब्याट्री चाहिन्छ। यद्यपि यो कुनै पनि आरजीबी कनेक्टर्सको साथ आउँदैन, तपाईं अझै पनि यो मदरबोर्डलाई पारदर्शी क्याबिनेटको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो तौल मा धेरै हल्का छ र यसैले, स्थापना मा सबै कडा कल हुन सक्दैन।
खरीददारहरूले यस उत्पादनलाई प्रकृतिमा आश्चर्यजनक हुन सकेका छन्। यो एक सभ्य प्रदर्शनको साथ आउँदछ जुन धेरैले मन पराउँछन्। जहाँसम्म, त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन्, जो उपभोक्ता प्रतिक्रियाका बारे अलिक निराश छन्। यस मदरबोर्डका लागि प्रतिस्थापनहरू दुई हप्ता लिन सक्दछ। तर यदि तपाईं बजेट र के तपाईं यस संग प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ विचार, Asus Prime B450M-A छनौट सबैको लागि एक अचम्मको विकल्प हुन सक्छ।
ASUS मदरबोर्ड सामान्यतया प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध छन्। Asus Prime B450M-A वाणिज्यिक मदरबोर्ड पनि एक भव्य शरीरको साथ आउँदछ जुन भित्र ठाउँ छ। यद्यपि यो सबै भन्दा राम्रो हुने छैन, यस मदरबोर्डले प्रदान गर्ने सुविधाहरू र प्रदर्शन सबैका लागि एक उपचार हो। कुनै पनि एमेच्योर गेमरले उनीहरूको मदरबोर्ड एएमडी राइजेन 36 00 36०० सँग कन्फिगर गर्न मनपर्दछ।
यो सबै पुस्ता एएमडी मोडेलहरूको साथ महान जान्छ
तपाईले आलराउन्ड ल्यान गार्ड सुरक्षा पाउन सक्नुहुन्छ
ASUS नियन्त्रण केन्द्रबाट ठूलो समर्थन
यो एक सभ्य नियन्त्रण आई / ओ ढाल संरक्षण छ
यस उत्पादनले DRAM अतिव्यापी सुरक्षा प्रदान गर्दछ
मूल्य थोरै उच्च छ
Heatsink प्रतिस्पर्धीहरु बीच सबै भन्दा राम्रो हो
AS.ASRock B450M PRO4 AM4 मदरबोर्ड
ASRock B450M मदरबोर्ड एक ठोस प्रदर्शन र सभ्य प्याकेजि withको साथ आउँदछ। यो एकल धातु टुक्राको साथ सबै पक्षबाट सुरक्षित गरिएको छ र I / O शिल्डको समग्र गुणवत्ता पनि राम्रो छ। त्यहाँ स्ट्याम्प्ड पोर्ट लेबलहरू छन् जुन यस उत्पादनलाई प्रकृतिमा आश्चर्यजनक हुन अनुमति दिन्छ। ASRock बाट सबै अन्य मदरबोर्डहरू तुलना गर्दै, प्रो from छनौट गर्न एक अद्भुत उत्पादन हो।
अडियोमा आउँदै, यो उपकरण रियलटेक ALC892 से सुसज्जित छ। यो प्राय: अडियो हार्डवेयरको लागि मानक ड्राइभर हो र तिनीहरूलाई uuA चुहावटमा मूल्या .्कन गरिन्छ। अवश्य पनि, तपाई ध्वनी स्तरहरूमा साधारण नियन्त्रणहरू पाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई गतिशील अडियो आवश्यकताहरूको लागि .1.१ च्यानलहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ। अप्टिकल आउटपुटको लागि कुनै आवश्यकता छैन, तर तपाईं सजिलो परिणामहरूको लागि HDMI पोर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
ASRock B450M PRO4 AM4 मदरबोर्डको लागि बायोस सेटअप प्रयोग गर्नको लागि उपयुक्त छ र यो उत्पादनमा पूर्ण पहुँचको साथ आउँदछ। तपाईं मोनिटरि advanced, उन्नत विकल्पहरू, र ओभरक्लोकिंग स्वभाव सहित सबैका साथ काम गर्न सक्नुहुनेछ। तीनिहरु तपाइँ लाई नियन्त्रण को स्तर पत्ता लगाउन र समायोजित गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंले मैन्युअल्ली बायोस अपडेट गर्नुपर्दैन।
यो उत्पादनको परीक्षणको क्रममा मैले फेला पारे कि यो कम ओभरक्लोकिंग परिणामहरूको साथ आउँदछ। व्यक्तिगत रूपमा, म अपरेटिंग भएको बेला १V को आसपास अपेक्षा गर्दै थिए। यद्यपि परिणामहरू प्रयोग गर्न वास्तवमै असाधारण छन् जब यो उपलब्धि आउँछ। यस्तो देखिन्थ्यो कि यस उत्पादनले १.4343V मा ओभरक्लोकिंगको साथ 2.२GHz स्थिर गति प्राप्त गर्यो। त्यस्तो अपवादात्मक प्रदर्शनको साथ धेरै मदरबोर्डहरू शीर्षमा आउँदैनन्।
मैले धेरै खरीददारहरू यस उत्पादनमा चासो लिएको देखेको छु। अधिक व्यक्ति ASRock बाट एक शानदार मदरबोर्ड को रूप मा यस उत्पादन को रुचि छ। M.2 भण्डारण र अद्भुत प्रदर्शनको कारण, यो एक शीर्ष विकल्प देखिन्छ। यसको शीर्षमा, ASRock B450M PRO4 AM4 मदरबोर्ड सम्पूर्ण शरीरमा RGB स्ट्रिप प्रस्तुत गर्दछ। नतिजाको रूपमा, यो सबैको लागि एक राम्रो विकल्प हुन्छ।
जब मूल्य प्रदर्शनको साथ मेल खान आउँदछ, ASRock B450M PRO4 AM4 मदरबोर्ड प्रयोग गर्नुभन्दा राम्रो केही पाउन सक्दैन। यसले उच्च-अन्तमा ग्राफिक्स र प्रोसेसर समर्थनको साथ प्रदर्शन सरल गर्दछ। कुनै पनि पेशेवर खेल प्रेमीलाई आफ्नो घरको लागि यो उपकरण मनपर्नेछ।
यस उत्पादनले उच्च गति र overclocking संरक्षण सुविधा
योसँग आकर्षक देखिनको लागि यससँग नवीन RGB स्ट्रिपहरू छन्
यो गेमि grade ग्रेड अडियोको साथ आउँदछ जुन प्रकृतिमा गतिशील छ
उत्पादन सभ्य M.2 भण्डारण परिणामहरूको साथ आउँदछ
यसले उत्कृष्ट ग्राफिक्स कार्डको लागि सभ्य PCIEx16 समर्थन गर्दछ
भण्डारण क्षमताले केही सुधार गर्न सक्दछ
पानी चिसो सुविधा सुधार गर्न सकिन्छ
MS. MSI प्रदर्शन गेमिaming मिनी ITX मदरबोर्ड
MSI ले धेरै गेमिंग मदरबोर्डहरू निर्माण गरेको छ, र निस्सन्देह, यो एक सबै सर्तहरूमा विशेष छ। MSI Mini-ITX निर्माताबाट पूर्ण सफ्टवेयर सूटको साथ आउँदछ। यसले तपाईंलाई चाँडै बायोस सेट अप गर्न र बोर्डको पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। न्यूनतम ड्राइभरहरूमा सफ्टवेयर सूट हुनु सधैं ठूलो फाइदा हुन्छ। तपाइँ पूर्ण कार्यात्मक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
अन-बोर्ड अडियोले तपाईंलाई गतिशील ध्वनि गुणको साथ एक सरल संयन्त्र प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। योसँग जापानी अडियो क्यापेसिटरहरू छन् जसले तपाईंको प्रयोगको लागि यो उपकरण उत्कृष्ट बनाउँदछ। धेरै एमएसआई मदरबोर्डहरूमा यो साझा सुविधा हुन्छ किनकि यसले तपाईंलाई पीसीबीको दुबै बाहिरी अडियो यन्त्रहरू कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ। यसले धेरै क्लीनर स्टीरियो बिभाजन प्रदान गर्दछ जुन पृष्ठभूमि चरण सुधार गर्न सक्दछ।
Mini-ITX को मेमोरी सपोर्ट यस उत्पादको सबैभन्दा धेरै चर्चा गरिएको सुविधाहरू मध्ये एक हो। यसले तपाईंलाई दुई DIMM स्लटहरू स्थापना गर्न अनुमति दिनेछ जसले which 64 जीबी DDR4 र्याम मेमोरीको स्पेस समावेश गर्न सक्दछ। यस बाहेक, तपाईं एक 3.0.० × १ PC PCIe समर्थन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसले उत्पादनलाई थप फाइदा पुर्‍याउँछ जसले तपाईंलाई उत्तम भण्डारण विकल्पहरू दिन्छ। धेरै मदरबोर्डहरू त्यस्ता उन्नत सेटिंग्सका साथ आउँदैनन्।
VRM कूलि and र overclocking जस्ता सुविधाहरूले यस उत्पादनलाई पनि अचम्मको बनाउँदछ। त्यहाँ चारै तिर धेरै कुनाहरू छैनन्, तर यसले निश्चित रूपमा + + २ चरण VRM कन्फिगरेसन ल्याउँछ। तपाइँ आफ्नो CPU वरपर चिसो वातावरणको अपेक्षा गर्न सक्नुहुनेछ यदि यसले लामो समयसम्म काम गरिरहेको छ भने। गुणस्तर सुधार गर्न, MSI ले IR3555 PoweR चरणहरू शुरू गरेको छ जुन विशेष रूपमा केहि उच्च-अन्तको मदरबोर्डहरूमा उपलब्ध छन्।
एउटा सुविधा जुन अधिक खरीददारहरूले यस उत्पादनको बारेमा मनपराउँदछ यो यसको राम्रो निर्माण र किफायती शरीर हो। यस उत्पादनको लागि प्रयोग गरिएको मूल्य प्रकृतिमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो र यसले MSI Performance Gaming Mini-ITX मदरबोर्डलाई अरूहरूलाई ओभर स्टेप गर्न अनुमति दिन्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा यस मदरबोर्डलाई मेरो साथीको पीसीमा प्रयास गरेको छु र जीटीए वाइस सिटी खेलिरहेको बेला यो राम्रो काम गरिरहेको देखिन्छ।
यदि तपाईं एक उपकरण चाहानुहुन्छ जसले तपाईंलाई पूर्ण नियन्त्रण र द्रुत सेटअप दिन्छ, MSI Performance Gaming Mini-ITX मदरबोर्ड छनौट गर्न एक आदर्श उत्पादन हो। यो प्रीमियम समर्थनको लागि बहु लेबल स्टिकर र वाइफाइ एन्टेनाको साथ आउँदछ। तपाईं आफ्नो नियमित परिणामहरूको लागि यी उत्पादनहरू प्रयोग गर्न मनपराउँनुहुनेछ।
VRM कूलि and र कन्फिगरेसन राम्रोसँग निर्मित छ
यो दुबै निर्मित WiFi AC र ब्लुटुथ समर्थनको साथ आउँदछ
यस उत्पादसँग B450 चिपसेट सुविधाहरू छन्
तपाईं मिनेटमा सरल सेटअप र कन्फिगरेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
MSI आदेश केन्द्र बाट समर्थन प्रयोग गर्न सभ्य छ
मूल्ययो मदरबोर्डको तुलनात्मक रूपमा उच्च छ
यस उत्पादनको साथ कुनै पोष्टकोड LD उपलब्ध छैन
As. Asus AM4 TUF गेमि X X570 मदरबोर्ड
Asus AM4 मूल रूपमा अत्यन्तै पेशेवर मोडेलको रूपमा शुरू गरिएको थियो। जे होस् यस मदरबोर्डको लागि मूल्य थोरै उच्च भए पनि, यस उपकरणसँग तपाईंले प्राप्त गर्ने सुविधाहरूले यसलाई सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मोडेलको रूपमा तल ल्याउँछ। यदि तपाईं कुनै पनि Ryzen 3000 मोडेल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंलाई पनी जानको लागि शीर्ष विकल्प हुन आवश्यक छ। एक वर्धित वाइफाइ र ब्लुटुथ विकल्पले यसलाई छनौट गर्न एक सभ्य उत्पादन पनि बनाउँदछ।
यो उपकरण प्रयोग गर्न अत्यन्त टिकाऊ र स्थिर छ। यो एकल आई / ओ धातु शरीरमा आउँदछ जुन सबै पक्षबाट सुरक्षित छ। एएमडी प्लेटफर्मको सबै आवश्यक तत्वहरू खेल-तयार सुविधाहरूको साथ आउँदछन्। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको केवल यो उत्पादन स्थापना गर्नु हो र यो तुरून्त काम सुरु गर्दछ। विनिर्देशहरूमा आउँदै, यस उत्पादनको एक स्थिर शरीरको लागि चारै तिर सैन्य-ग्रेड घटकहरू छन्।
यस अद्भुत उत्पादनको पावर डिजाइन सुविधा सबैको लागि एक राम्रो विकल्प हो। यसमा १२ + २ पावर चरणहरूको मद्दतले उन्नत VRM छ। तपाईं यो सुविधा दुबै उच्च-साइड र कम-साइड MOSFET ड्राइभरहरूसँग मिल्काउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई एक प्याकेजमा सबै चीजहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। उत्तम परिणामहरूको लागि सबै पछिल्ला प्रोसेसरहरूका मागहरू पनि ल्याउँदछ। डा मोको पावर चरणहरूको उपस्थितिले शक्तिको अधिक राम्रो परिभाषा गर्दछ।
VRM को उपस्थितिमा आउँदैछ, Asus AM4 कुनै पनि उत्पादन भन्दा धेरै कूलर देखिन्छ। यो एक सक्रिय हीटसिink्कको साथ आउँदछ जुन PCH र VRM लाई समर्पित छ। यी सुविधाहरूको कारणले, तपाईं खेलहरू खेल्दै गर्दा सबै उच्च-अन्त हार्डवेयर कन्फिगरेसनहरू प्रयोग गर्न यो सजिलो हुन्छ। तपाईं दुबै तरल र फ्यान कूलरहरूको पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
Asus AM4 TUF गेमि X X570 मदरबोर्ड खरीद गर्ने सबै उपभोक्ता तुरून्त यस अद्भुत उत्पादनको साथ प्रेममा परिणत भए। यो एक सभ्य हार्डवेयर कन्फिगरेसनको साथ आउँदछ जुन सेटअप गर्न द्रुत छ। यो नयाँ रिलीज हो र यसैले तपाईले अपडेटहरूको लागि पनि पर्खनु पर्दैन।
Asus AM4 TUF गेमि X X570 मदरबोर्ड विशेष रूपमा उच्च-अन्त गेमि requirements आवश्यकताहरूको लागि निर्मित छ। यस उत्पादनको सबै विशिष्टताहरू प्रयोग गर्न उत्कृष्ट छन् र यो छिटो प्रदर्शनको लागि डिजाइन गरिएको हो। ओभरक्लाकि issues मुद्दाहरू पनि कम तल्लो स्तरमा कम गरिएको छ।
मूल्ययस मदरबोर्ड को धेरै प्रतिस्पर्धी छ
Asus AM4 UEFI bios समर्थनको साथ आउँदछ
यो चिपसेट गर्न सक्रिय शीतलन समर्थनको साथ आउँदछ
तपाईं २. G Gb ल्यानको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
यो सजिलैसँग Ryzen53000 CPU सँग उपयुक्त छ
त्यहाँ कुनै समर्पित PCIex1 पोर्ट छैन
तपाईंले कुनै पनि यूएसबी 1.१ स्लट उपलब्ध पाउनुहुने छैन
Ryzen53600 के हो?
AMD Ryzen53600 मूलतः AMD द्वारा शुरू गरिएको छ कोर कोर प्रोसेसर हो। खेल को दुनिया मा लगभग सबैलाई यो प्रोसेसर को बारे मा थाहा छ किनकी उच्च-अन्त विवरणहरू र लोड क्षमताले यसलाई ल्याउन सक्छ। विशिष्टताको कुरा गर्दा, यो आश्चर्यजनक उत्पादन १२-थ्रेड AM4 प्रोसेसर कम्पोनेन्टहरूको साथ आउँदछ। एक विशिष्ट Zen2निर्माण यस उत्पादन को निर्माण को लागी प्रयोग गरीन्छ। त्यस्ता अपग्रेडहरूको साथ कुनै पनि राइजेन प्रोसेसरले तपाईंको मनपर्ने खेलहरू खेल्ने क्रममा अचम्मको प्रदर्शन राख्दछ।
AM4 मदरबोर्डहरू पहिले नै सभ्य प्रदर्शनको लागि प्रतिष्ठा छन, तर यस प्रोसेसरलाई थप सुविधाहरू आवश्यक छ। यसैले गेमहरू एक मिल्दो मदरबोर्ड खोज्छन् जुन यस उत्पादनसँग राम्रोसँग जान्छ। एएमडी राइजेन 36 0000०० को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सको बारे आउँदैछ, यो clock.6 गीगाहर्ट्जको घडीको गतिसँग अधिकतम 2.२ गीगाहर्ट्जमा निर्माण गरिएको हो।
किनकि यसले डुअल-च्यानल DDR4 रमलाई समर्थन गर्दछ, त्यस्तो मदरबोर्डहरूको साथ जोडा मिलाउँदा तपाईंलाई कुनै पनि समयमा उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले मदरबोर्ड खरीद गर्न अगाडि हेर्नुपर्छ जुन दुवै GPU र CPU को सर्तमा उच्च क्षमता राख्छ। केवल यो गरेर, तपाईं महान खेल आवश्यकताहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ।
यो W 65 डब्ल्यू डिजाईन पावरको साथ आउँदछ जसमा बिल्ट-इन स्टिल्ट कूलर सामेल छ। सरल शब्दहरूमा, यसले यो प्रोसेसर तातो हुने संकेत गर्दछ।
के Ryzen53600 i5 भन्दा राम्रो छ?
दुबै Ryzen5र Core i5 घाँटीमा गर्दन हुन् जब म तिनीहरूको विशिष्टताहरू तुलना गर्दछु। जे होस्, AMD अलि अगाडि छ जब यो प्रदर्शन र पनि बजेट मूल्यमा आउँदछ। निश्चित रूपमा, इंटेलबाट प्रोसेसरहरू उच्च दायरामा राखिन्छन्। यो मुख्यतया heatsink को कारण हो। अवश्य पनि, Ryzen5एक कम हीटसि has्क छ, तर कोर i5 तुलना गर्दा धेरै कम छ।
यदि तपाईं अन्य विशिष्टताहरू जस्तै प्रदर्शन, घडी-गति, र विनिर्देशहरूसँग तुलना गर्नुहुन्छ भने यो लगभग उस्तै हो। जे होस् ती दुबैका लागि प्राविधिक सुविधाहरू उस्तै छन्, राइजेन of को प्रदर्शन अद्भुत छ र यो अरू भन्दा अलि अगाडि छ! Intel को उर्जाको खपत अलि कम छ। तर यसले प्रदर्शनलाई कुनै असर पार्दैन।
Ryzen 36 00 36०० किन यति लोकप्रिय छ?
Ryzen5का इंटेल कोर i5 मा सीधा प्रतिस्पर्धी छ वा AMD बाट कम अन्त मोडेलहरू। तपाईं पहिले नै मूल्य कारक मार्फत जानुभयो र यस्तो देखिन्छ कि राइजेन5यसमा निर्दोष छ।
निष्पक्ष हुनका लागि, यो सबै विशेष सुविधाहरूको साथ आउँदछ जुन कुनै पनि उच्च-अन्त प्रोसेसरले बोक्दछ। त्यसो भए तपाईलाई यसका लागि उपयुक्त मदरबोर्ड चाहिन्छ। Ryzen5को साथ तपाइँको पुरानो मदरबोर्ड प्रयोग गर्नुहुने छैन यदि बायो सेटअप समावेश गरिएको छैन भने। यो सजिलैसँग कुनै पनि अनलाइन स्टोरमा उपलब्ध छ र प्रस्ताव गरिएको मूल्य अत्यधिक अनुकूल छ।
के मैले Ryzen5को लागी BIOS अपडेट गर्न आवश्यक छ?
प्रत्येक प्रणाली स्तरवृद्धि गर्न ड्राइभर अपडेट आवश्यक पर्दछ। त्यसोभए यदि तपाइँ बायोस अपडेटको लागि अप्ट इन गर्नुहुन्न भने हार्डवेयर ड्राइभरहरू सहयोगी हुनेछैनन्। ग्राफिक्स मा माइनर अपग्रेड बुझिन्छ। निश्चित रूपमा सम्पूर्ण मदरबोर्ड परिवर्तन गर्न तपाईंलाई पूर्ण रूपमा बायोस सेटअप अपग्रेड गर्न आवश्यक पर्दछ। यहाँ सम्म मैले यो प्रयास गरेको छु र केही मदबोर्डले जस्तै गीगाबाइट एक्स 7070० स्वचालित रूपमा यो काम गर्दछ।
मलाई Ryzen5को लागी कति प्रशंसक हेडरहरू चाहिन्छ?
अब यो काम गरिरहेको प्रकारमा निर्भर हुन्छ। उदाहरण को लागी, मानौं मानौं कि तपाईले यो प्रोसेसर उच्च-एंड गेमि forको लागि किन्नु भएको छ। यद्यपि उपयुक्त मदरबोर्डसँग सभ्य तातो सिink्क विकल्पहरू छन्, एएमडी प्रोसेसरहरू कहिलेकाँही अत्यधिक गरम हुन्छन्। कुल fan फ्यान हेडर तपाइँको उपयोगको लागि आदर्श हुन सक्छ। तरल चिसो को लागी एक हावा पम्प कनेक्टर एक उपयोगी विकल्प पनि हुन सक्छ।
के यो जहाजको ग्राफिक्स कार्डको साथ फोर्टनाइट चल्छ?
निष्पक्ष हुनका लागि, यस उत्पादनको साथमा जहाजमा ग्राफिक्स कार्डको जस्तो कुनै अवधारणा उपलब्ध छैन। जब तपाईं फोर्टनाइट खेल्न इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईंले सबै हार्डवेयर आवश्यकताहरू पूरा भएको निश्चित गर्नु आवश्यक छ। फोर्टनाइट खेल्नको लागि तपाईंसँग कम्तिमा AMD Radeon HD 7870 वा GeForce GTX 660 वा अपग्रेड गरिएको मोडेल हुनै पर्छ। पक्कै पनि, यी दिमागमा राख्दै, तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि सबै ठीकठाक हुन्छ।
म कसरी मेरो Ryzen53600 BIOS अपडेट गर्ने?
त्यहाँ फरक प्रक्रियाहरू छन् जुन तपाईं अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं आफ्नो बायो मेनू अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने। केहि मदरबोर्डहरू जस्तै गीगाबाइटले क्यु-फ्ल्यास मेनू प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई सजिलै यो फाइल डाउनलोड गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र बाँकी तपाईंको पीसीमा अद्यावधिक स्थापना गर्न सक्दछ जब यो उपलब्ध हुन्छ। जहाँसम्म तपाईं म्यानुअल अपडेट गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं कुनै पनि फ्ल्यास ड्राइभमा बायोस डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ।
के x570० ओभरकिल ill 36०० को लागि हो?
यो कुन कुराको लागि तपाईंको मदरबोर्ड सुसज्जित छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। यदि यो Ryzen 00 36०० मात्र हो भने, यसले प्रोसेसरलाई overkill गर्दैन। तर यदि त्यहाँ हार्डवेयरमा विभिन्न अपग्रेडहरू छन् जस्तै जीपीयू वा विस्तृत र्याम, यसले थोरै ओभरकिल गर्दछ। सामान्यतया, यदि त्यहाँ अन्य हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरूमा अभाव छ भने, यो मदरबोर्ड कहिलेकाँही अभावमा देखा पर्दछ।
Ryzen53600 एक ग्राफिक्स कार्ड को आवश्यकता छ?
यो एक फेरी तपाइँ आफ्नो पीसी संग के काम को प्रकार मा निर्भर गर्दछ। निष्पक्ष हुनका लागि यो उत्पादन कुनै पनि प्रकारको ग्राफिक्स स्थापना भएको वा निर्मितमा आउँदैन। ग्राफिक आउटपुट जुन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एकदम न्यून छ र यसलाई सँधै तपाईलाई एउटा जोड्न आवश्यक पर्दछ। तपाइँ एचडी गेमहरू खेल्न वा उच्च-ग्राफिक आउटपुट भिडियोहरू खेल्ने कार्यको प्रकारमा निर्भर गर्दै, तपाइँले यस मदरबोर्डको साथ gpu स्थापना गर्नुपर्दछ।
के Ryzen5छनौट गर्न के यो खेलको लागि राम्रो छ?
यो पाठ्यक्रम हो। राइजेन king लाई लिनेमा त्यहाँ धेरै कठिनाइहरू छैनन् र यसले तपाईंको अपेक्षाहरू पूरा गर्नुपर्दछ। राइजेन Cons लाई विचार गर्दै, यसमा अद्भुत घडीको गति छ। त्यसैले यस प्रोसेसरको साथ इन-खेल अनुभव उत्कृष्ट हुन बाध्य छ। एकै साथ, AAA शीर्षकहरू यस मदरबोर्ड बिरूद्ध प्रयोग गर्न प्रख्यात छन्। यसले तपाईंलाई प्रति सेकेन्डमा राम्रो फ्रेमहरू ल्याउन मद्दत गर्दछ।
एएमडी राइजेन 36 00 36०० छनौट गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आदर्श विकल्प हुन सक्दछ जो फोर्टनाइट जस्ता खेल खेल्न इच्छुक छन् वा ड्युटीको कल: आधुनिक वारफेयर। त्यस्ता खेलहरू खेल्नको लागि आवश्यक विशिष्टता बढी हुनेछ।
यसैले, GPU, र्याम वा एक सभ्य मदरबोर्ड जस्ता हार्डवेयरको एक अनुकूल सेट छान्नु महत्वपूर्ण छ। मिल्दो मदरबोर्डहरूले यस प्रोसेसरलाई चिसो हुन अनुमति दिन्छ यसले ठूलो मात्रामा तातो उत्पन्न गरे पनि।
यदि तपाइँ केवल तपाइँको मनपर्दो खेल खेल्दा तपाइँको प्रोसेसर क्र्यास हुन चाहानु हुन्न भने, एएमडी राइजेन for का लागि सर्वश्रेष्ठ मदरबोर्डहरूको सूचीमध्ये कुनै पनि छनौट गर्नुहोस् जुन तपाइँलाई सबैभन्दा धेरै मन परेको छ र यसको प्रदर्शन के हो हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
PS5 बनाम Xbox श्रृंखला X
डिज्नी प्लस बन्डल (२०२०) - Disney +, Hulu र ESPN + पाउनुहोस्
फायरस्टिकका लागि सर्वश्रेष्ठ VPN (२०२०) - सुपर फास्ट र सुरक्षित
गोफन टिभी विद्यार्थी छुट कसरी पाउने?
कसरी २०२० मा Hulu विद्यार्थी छूट पाउने?
ExpressVPN कालो फ्राइडे २०२० - आश्चर्यजनक डीलहरू र प्रस्तावहरू
व्हाट्सएप बनाम सिग्नल - कुन योग्य छ?
२०२० मा सर्वश्रेष्ठ क्यामस्केनर विकल्प
आईफोन १२ मोडेल नम्बर (A2172, A2402, A2403, A2404)
निन्टेन्डो स्विच बनाम स्विच लाइट - कुन चाँहि मूल्यवान छ?
नि: शुल्क रोबलोक्स कोडहरू कसरी पाउने
प्राइम फ्री ट्रायल कति लामो हुन्छ
कसरी आईप्याड मा असीमित रोबक्स प्राप्त गर्न
फिल्महरू नेट फ्रि फिल्महरू अनलाइन हेर्नुहोस्
म फिल्महरूका लागि उपशीर्षकहरू कहाँ पाउन सक्छु
तपाईं स्ट्रीमिंग फिल्महरू अनलाइनको लागि समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ